Futhi uyazi ukuthi odokotela bama-orthopedic bancoma ukuthi abesifazane bembethe izicathulo ezahlukene phakathi nosuku, beshintsha ukuphakama kwesithende kanye ne-angle of ascension? Ukushintsha izicathulo kunikeza ukuvimbela kwemvelo yezifo eziningi zomlenze. Ngaphezu kwalokho, kuyisikhathi esihle kakhulu sokuthenga. Ikakhulukazi kusukela ngenkathi yehlobo evele ekhoneni futhi sekuyisikhathi sokuthola izimbadada ezintsha nezicathulo zokuhamba okujabulisayo neholide eliqhakazile. Mayelana namamodeli azoba amahlombe ehlobo futhi sizoxoxwa ngakho esihlokweni sethu, esilungiswe ngokuhambisana nomkhiqizo owaziwayo "Econika".
Ukunethezeka nokuhlelekile: izicathulo zehlobo zasehlobo zonyaka
Imfashini, yebo, i-lady isingenangqondo, kodwa ehlobo ka-2015 iyoba yinto engcono kakhulu kunanini ngaphambili elihle kakhulu engxenyeni enhle yesintu - esimweni sokusebenza kanye nenduduzo. Lezi zindlela ezibonakalayo zikhonjiswe ezicathulweni zabesifazane, ezizoba yisikhathini esisha, isithende esincane kanye nezinto zemvelo.
Uma sikhuluma ngamamodeli athandwa kakhulu, inketho enhle kunazo zonke nezinhloso eziningi izakuba izimbadada. Zahlulela wena, wesifazane futhi ulula, ziphelele ngo-anyanisi othandanayo, futhi udale isithombe esifanele usuku nosuku. Futhi uma ukhetha imodeli ephansi-heeled, khona-ke ungakwazi ukubeka ngokuphepha kulezi zimbadada ukuze uhambe futhi uthathe nabo eholidini. Into esemqoka ukuthola umbhangqwana ozohlanganisa izitayela zesitayela kanye nenduduzo. Ngokwesibonelo, njengoba izicathulo ezikhanyayo kusuka ebomvu isikhumba sangempela ALLA PUGACHOVA kusukela inkampani "Econika". Isithende esithambile esinezintambo sinikeza ukuzinza nokusebenza kahle, futhi izinsipho ezincane ezungeze isisindo zenza lesi simodeli ikakhulukazi besifazane. Kuzobukeka okungabonakali futhi izicathulo ezimnyama ezifakwe esikhwameni esicwebezelayo nesigqoko se-matte kusukela ekuqoqweni kwakamuva kwe-"Econika". Umdlalo wokukhanya, ovela ngokungafani kwezinto ezibonakalayo, ngokuqinisekile uzokwenzela ukunakwa emilenzeni emincane, futhi umklamo ohlelekile futhi olula uzokutshela ngomqondo wakho ongenakuqondakalayo wesitayela.
Uma lezi zithombe ezingenhla ziyi-godsend zezinsuku zasehlobo ezishisayo, izicathulo ezilandelayo zidalwe kuphela ngezithombe zakusihlwa. I-hairpin enhle kakhulu, idizayini enhle neyokusebenza kwangempela - lezi yizingxenye ezintathu zempumelelo ye-model engeyona encane yamashukela amnyama esikhumba kusuka ku-ALLA PUGACHOVA. Amantombazane angamaqhawe angesabi ukwanda, kufanelekile ukubuka izicathulo ezivulekile ezivela eqoqweni ehlobo le-brand "Econika". Lo mfanekiso wicker uzonikeza isithombe sakusihlwa sokukhohlisa nokukhanya, ngakho imilenze yakho ngeke ihlale ingabonakali. Ngendlela, i-weaving engavamile kanye namaphethini okuvulekayo nawo aphakathi kwezindwangu ezinkulu zezicathulo zalesi sizini. Imihlobiso emihle ebonakalayo yenza izicathulo zingenasisindo. Imodeli emhlophe yeqhwa nephethini elivundiwe ngumsebenzi wangempela wobuciko ovela kubanikazi be brand "Econika".
Izimbadada emgqeni nazo zizofanele kule nkathi. Ehlelekile futhi ewusizo, iyadingeka ngamaholidi ehlobo nokugqoka nsuku zonke. Njengoba kukhona izinto zemvelo kulesi simo, i-wicker wedge izothandwa ngokukhethekile, njengokwesibonelo, imodeli eluhlaza kusuka ku-RIAROSA kanye nezinhlobonhlobo zesikhulumi se-coork of the brand efanayo.
Eziwusizo futhi ezikhanyayo: izicathulo ezisezingeni eliphezulu kakhulu zasehlobo
Njengoba izicathulo sezikhiphe, yisikhathi sokuthola ukuthi iziphi izicathulo ezizobe zishaywa ngesikhathi sonyaka. Ngokuqinisekile umuntu angasho eyodwa kuphela - ewusizo nenhle. Izintambo ezincane, zonke izinhlobo zokugqoka, imigqa elula, ukuklama kwabesifazane - esinye sezici eziyinhloko zezicathulo zezimfashini zabesifazane kuleli hlobo, njengezicathulo ezinomzimba eziphambili ze-RIAROSA ezivela ku- "Econika". Nakuba ethandwa ekusetshenzisweni kwezinketho ngesitayela saseRoma ngesiphakamiso esiphakeme.
Ukushaya okuyinhloko kwenkathi ezayo kuyisidada esikhwameni esincane esenziwe phansi, esenziwe ngesitayela esixubekile se-tech minimalism ephezulu. Isici esivelele salokho kunamaphesenti kukhona okuwukuphela komuntu oyedwa, ngokuvamile omhlophe, kodwa ekhululekile kakhulu ukugqoka ngenxa yokulula kwezinto ezisetshenziswayo. Isiteji singaba flat flat, njengoba, isibonelo, in the brown brown RIAROSA, futhi ukuphakamisa kancane.
Ngokuqondene nezixazululo zombala wemfashini, lo mkhuba unemibala yemvelo ekhanyayo futhi ivinjelwe ama-shades amancane. Ngakho-ke, ungakhetha ngokuphepha phakathi kwezicathulo ezibomvu zokubamba kanye namamodeli amancane amancane. Ikakhulukazi kusukela kokukhethwa kokuqala nesesibili kuqoqo elisha lehlobo le-brand "Econika" lande!
Bembethe kanjani futhi baqeqesha kanjani ezikhathini zasendulo?
Gcina ikhanda lakho emakhazeni futhi izinyawo zakho zifudumele
Imfashini yesimanje yazizwa izikhumba
Bold and stylish: izicathulo zabesifazane ngesitayela se-grunge kusuka e-Econika
Indlela yokugwema ukulimala kwezingane: amathiphu kubazali
Amapancake ngenyama enobisi
Ukubukeza kwefilimu "Ubulili Nomuzi"
U-Olga Prokofieva: Kufanele ngigqoke izibuko zokukhanya
Izinsisekelo zokunakekela ingane esanda kuzalwa
Izindlela Eziyishumi Zokuyeka Ukulala Emsebenzini
Ukupheka kobuhle obuvela emazweni ahlukene